Caymiska Baabuurka jaban ee Darawalada Cusub ee ka yar 25 sannadka 2022
Bogga ugu weyn Caymiska Baabuurka jaban ee Darawalada Cusub ee ka yar 25 sannadka 2022
In kasta oo wadista baabuurtu tahay madadaalo, ka -qaybgalka shilku ma aha madadaalo! Darawalada cusub ayaa had iyo jeer feejignaada maadaama aysan aqoonin giraangiraha. Sababtaas awgeed, waxaa loo xilsaaray inay helaan caymis baabuur.
Shirkado caymis oo badan ayaa qiimo dhimis siiya darawalada cusub ee ka yar da'da 25. Miyaad heshay taada? Waxaa la joogaa waqtigii la hubin lahaa haddii aad u heleyso qiimaha caymiska ugu fiican baabuurkaaga.
Nasiib darrose, darawalada cusubi waxay u muuqdaan inay lacag badan ku bixiyaan caymiska baabuurka maxaa yeelay waxay leeyihiin khibrad wadid oo xadidan waxayna u nugul yihiin khataro waddo oo badan.
Runtu waxay tahay, ma aha inaad lacag badan bixisid haddii aad hayso macluumaadka saxda ah ee ku saabsan qiima dhimista aad u -qalantid. Tanina waa waxa aan adiga ku matalaynay baaritaan.
Maqaalkani wuxuu keenay dhammaan caymiska baabuurta jaban ee darawalada cusub ee ka yar 25.
Caymiska Baabuurka ugu Fiican oo Jaban ee Darawalada Cusub ee Ka Yar 25
Waxaa jira shirkado aad u badan oo bixiya qiimo dhimis caymis baabuur wadayaasha cusub. Laakiin, waxaan keenay shirkadaha ugu sareeya kuwaas oo bixiya dalabyada ugu fiican.
Waxay ka mid yihiin kuwan soo socda:
Af -hayeenka Geico waa qorraar yar oo cagaar ah oo aan dhammaanteen jecel nahay.
GEICO waxay leedahay caymiska baabuurta ee ugu raqiisan darawalada aan qaangaarin ee California. Goobaha kale waxay leeyihiin dalabyo waaweyn sidoo kale.
Ku darso helitaan dheeraad ah oo ah 15% baabuurka, mootada, iyo siyaasadaha RV ee muddada caymiska caymiska oo dhan 6-bilood iyo 12-bilood.
Kani waa mid ka mid ah caymiska baabuurka ugu fiican ee loogu talagalay dhalinyarada qaangaarka ah ee ka yar 25 jir marka ay timaaddo dabacsanaan.
Horumarka ayaa kaa caawin doona inaad hesho qiimayaasha ugu fiican xitaa haddii aysan ku jirin shirkadooda. Tusaale ahaan, waxaa jira magaca aaladdaada qiimaha oo isku dayaysa inay ku habboonto caymiskaaga dhaqaalahaaga.
Waxay yihiin kuwo qabow!
Waxaa jira qiimo-dhimisyo ay ka mid yihiin wadid ammaan ah, baabuur badan iyo siyaasad, lacag-bixin buuxda, iibsashada siyaasadda internetka, darajooyin wanaagsan (arday), iyo qaar kaloo badan.
3. Beerta Gobolka
Beerta dawladdu waa ceeriin baabuur kale oo raqiis ah oo loogu talagalay darawalada cusub ee ka yar 25 sano.
Waxaa jira adeeg loogu talagalay darawalada dhallinyarada ah oo lagu magacaabo Steer Clear. Haddii aad haysato liisankaaga 3 sano oo aadan diiwaangelin shilal, waxaad ku kasban kartaa ilaa 15% dhimis xagga siyaasaddaada ah.
Booqo Beeraha Beeraha.
Arag sidoo kale: Lacag ku bixi si aad u wado Baabuurkaaga Illaa $ 50 Saacadiiba Hantida
USAA waa caymis baabuur oo aad u jaban darawalada cusub. Waxayna leeyihiin adeeg macmiil oo weyn.
Waxaa jira barnaamij ruqsad otomaatig ah oo loogu talagalay dhallinyarada darawalada ka yar 25. Waa in lagu dhiirri -geliyo wadista baabuurta ee darawalada dhallinyarada ah. Caadi ahaan, waxaad heli lahayd adabtaro lacag la'aan ah oo ku xirta dekadda baarista cudurka ee gaariga oo ku xira taleefankaaga casriga ah.
Qiimahoodu aad buu u jaban yahay marka loo barbar dhigo shirkadaha kale.
5. Xorriyadda Mutual
Ma ka yar tahay 25, arday haysta GPA ee 3.0? Kadib, u isticmaal xorriyadda wadajirka caymiska baabuurkaaga maxaa yeelay waxay ku siin doonaan caymiska ugu jaban uguna fiican.
Booqo Mutual Liberty.
Caymisku waa mid ka mid ah shirkadaha caymiska baabuurta ee ugu jaban warshadaha. Waxay kaloo siiyaan adeegyo aad u wanaagsan darawalada cusub, dhalinyarada iyo ardayda ka yar 25.
Waxaa ka mid ah dalabyada badan ee darawalka da 'yar waxaa ka mid ah dhimista PAC 12 kaas oo siiya 15% dhimis ardayda waqtiga-buuxa dhigata USC, UCLA, Stanford, Cal Berkeley, Washington, Washington State, Oregon, Oregon State, Arizona, Arizona State, Utah, iyo Colorado.
Allstate uma muuqato inay siiso qiimaha ugu hooseeya Darawalada ka yar 25 ee gobolada badankood, laakiin waa shirkad caymis sumcad leh oo aad aamini karto.
Waxay ku bixiyaan caymiskooda baabuur iyada oo loo marayo Esurance. Waxay bixisaa qiimo dhimisyo caymisyo kala duwan sida qiimo-dhimista ardayda ka qalinjebisay kulliyadda Pac-12, qiimo dhimis wadid ammaan ah, iwm.
Kani waa caymiska baabuurka ugu jaban ee darawalada dhallinyarada ah ee ka dambeeya gawaarida marmar uun. Waxaad ku kaydin doontaa lacag badan Metromile
Bixinta caymiska halkii mayl waa mid la awoodi karo darawalada masaafada yar. Haddii aadan wax badan wadin, waa inaadan lacag badan ku bixin baabuurka caymiska.
Eeg Sidoo kale: Ma inaan iibsadaa baabuur cusub ama baabuur la isticmaalay? - Wareegga Maalka
Kani waa caymis baabuur oo raqiis ah oo loogu talagalay darawalada cusub.
Hel caymis wax walba iyo nooc kasta oo baabuur ah. Waa wax aad u jaban ardayda maadaama qiimahoodu ka duwan yahay kuwa kale. Dhallinyaradu sidoo kale waxay leeyihiin qiimo dhimis gaar ah.
Mercury wuxuu leeyahay xirmo caymis darawallada nooc kasta ha ahaadee, oo ay ku jiraan dadka leh khibrad darawalnimo oo yar ama diiwaannada wadista oo aan kaamil ahayn.
Shirkaddu waxay kaloo bixisaa kaalmada 24/7 ee waddada iyo ikhtiyaarka daboolida farsamo ee dheeraadka ah. Ikhtiyaarkani wuxuu u fiican yahay dhalinyarada jecel inay sahamiyaan.
Caadi ahaan, Mercury waxay siisaa qiime jaban macaamiisha mustaqbalka ee leh dhibcaha dhibcaha ee ka hooseeya 580.
Waxay u bilaabeen sidii shirkad caymis beeralayda, laakiin hadda waxay bixiyaan caymisyo badan.
Darawallada dhallinyarada ah ee ka yar 25 sano waxay ka faa'iideysan karaan adeegyadooda caymiska baabuurta ee raqiiska ah. Baabuur wadista oo ammaan ah waxay ku kasbataa wanaag dhimis.
12. Dalka oo dhan
Nationwide waxay siisaa qiimo dhimis arday oo wanaagsan ardayda waqtiga buuxa ee ilaaliya celceliska B.
Waxay sidoo kale ku fiican yihiin darawalada diiwaanka ku lahaa sheegashooyin.
Socotadu waa shirkad aad u cusub oo leh qiime caymis baabuur jaban oo loogu talagalay darawalada wanaagsan, darawalada cusub, xitaa kuwa 19 iyo wixii ka yar.
Amica waxay bixisaa qiimo dhimis wadid oo wanaagsan. Waxaad u-qalantaa sicir-dhimistan haddii aad haysato ugu yaraan saddex sano oo waayo-aragnimo wadista baabuurka ah adiga oo aan lahayn shil khalad ama xadgudub guuritaan ah.
Sicir -dhimista Ardayga ee Wanaagsan waxay hoos u dhigi kartaa lacagtaada ilaa 25%. Waxa intaa ka badan ayaa ah inay sii socon doonto xitaa markaad ka qalinjabiso kulliyadda, illaa da'da 25.
Baakadaha Caymiska Baabuurka ee Ka Yar 25 jir
Halka dhammaan shirkadaha kor ku xusan ay wanaagsan yihiin. Fiiri ikhtiyaarkaaga gobolka ee caymiska baabuurka sidoo kale. Intooda badan waxay siiyaan qiimo dhimis weyn ardayda iyo darawalada cusub ee ka yar 25.
Shirkadaha Caymiska Gobolka sida
Qaar ka mid ah shirkadaha Xafiiska Beeraha ee maxalliga ah
Arag sidoo kale: 5 Caymiska Safarka Ardayga ee ugu Fiican: Waxa ay Daboolayso iyo Sababta
Kuwani waa caymiska baabuurka jaban ee darawalada cusub ee ka yar 25. Markaad raadineyso qorshe caymis, la xiriir. Ka digtoonow fursadaha Caymiska Gobolka sidoo kale. Waxay sidoo kale siiyaan qiimo -dhimis weyn darawalada cusub.
10 Siyaabood oo la Xaqiijiyay oo ku Saabsan Sida Si Degdeg ah Loogu Helo 300 oo Doollar 2022
Ka hadlida shirkad caymis oo caqli badan, ma jirto shirkad caymis oo isboorti ah oo qof walba leh sababtoo ah qof walba waxyaabaha lagama maarmaanka u ah iyo…
10 Caymiska Ilkaha ee ugu Fiican California | 2022
Helitaanka daryeelka ilkuhu waxay noqon kartaa qaali, tanina waa run gaar ahaan haddii aad u baahan tahay shaqo soconaysa...
Sida Loo Codsado Dheefaha Lambarka Bulshada Markaad 62 jir tahay 2022
Bilawga macaashka Lambarka Bulshada waa tallaabo muhiim ah oo loo qaaday hawlgab. Waa soo jiidasho leh inaad lacagta qaadato…
Marka laga reebo qoyska iyo asxaabta, shay kale oo ugu muhiimsan noloshaada oo mudan in la ilaaliyo waa xayawaankaaga.
Baabuurtu waxa ay ka mid yihiin hantida bini’aadamka ee qiimihiisu ku badan yahay, ka maarmi karana ma jirto. Taasi waa sababta ay u baahan yihiin…